`` တော်စမ်း မိခိုင်၊ နင့်စကားတွေ လွန်လာပြီ၊ နင့်ကိုယ်နင် ဘာများထင်နေလို့လဲ၊ မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာ ကြာပြီ၊ အရေးပေး ရောင့်တက်၊ ပရိသတ်တွေ ချီးမြှင့် မြှောက်စားတယ်ဆိုတာ နင်တစ်ယောက်တည်း တော်လို့ မဟုတ်ဘူး၊ အားလုံးက တက်ညီလက်ညီနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြလို့ ခိုင်သစ္စာဆိုတဲ့ နာမည်တစ်လုံးရလာတာ၊ ကျေးဇူးမကန်းနဲ့၊ နောက်ပြီး ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာလည်း မဟုတ်တဲ့သူကို နင်ဘာတွေမက်စရာ ရှိလို့လဲ၊ သူတို့ကို နင်ဘယ်လို ယုံရမလဲ၊ ကျေးဇူးဆိုပြီး အဲဒီကျေးဇူးတွေရဲ့ နောက်မှာ ကြောက်စရာအန္တရာယ်ဆိုးကို နင်ဘယ်သိပါ့မလဲ၊ ခုချိန်မှာ နင်က ခိုင်သစ္စာ ခိုင်သစ္စာ ဆိုပြကီး မာန်မာန၊ အတ္တတိမ်သလ္လာတွေ ဖုံးနေတာကိုး၊ ကောင်းပြီ ငကန်းသေ ငစွေပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ ညည်း ကတိအတိုင်း ဒီည ကလိုက်ဦး``
ခိုင်သစ္စာ၏ အငြိမ့်ခွင်အခန်းသို့ ရောက်ပြီဖြစ်၍ အပြင်တွင် လှည့်ပတ်ဈေးတန်း လျှောက်နေသော အစ်ကို ကာလသားတစ်သိုက် ဇာတ်စင်နားသို့ အလျင်အမြန် စုရုံးရောက်ရှိလာကြသည်။ ခိုင်သစ္စာ၏ အလှ၊ ခိုင်သစ္စာ၏ အဆို၊ အပြော၊ အကနှင့် ညုလုံးလေးများကို လွတ်သွားမည်စိုး၍ ရောက်သည့်နေရာများမှ အပြေးအလွှား လာရောက်အားပေးကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ခိုင်သစ္စာ၏ အပြုံးသည် သူတို့အား ညှို့ယူဖမ်းစား လက်ယပ်ခေါ်နေသည်။ ယနေ့ခေတ် အငြိမ့်များတွင် မင်းသမိး၏အကထက် လူရွှင်တော်၏ ပြက်လုံးများကို ပို၍ သဘောကျကြသည်။ သို့ရာတွင် ခိုင်သစ္စာ၏ အငြိမ့်ကို ကြည့်မိသူတိုင်း မှော်ထက်လိုက်တာ အိမ်ကဟာမနှင့် ကွာပါ့လို့ ပြောရလောက်အောင် မင်းသမီးတို့ တတ်အပ်သော မာယာလေးဆယ်အပြင် ဆယ့်နှစ်ကြိုးကဝေ အတတ်ပါ ကျွမ်းတဲ့အတွက် တတ်လည်း တတ်နိုင်ပါရဲ့ဟု အောချရအောင် ပြည်သူတွေ ချစ်တဲ့ ခိုင်သစ္စာ။
ယနေ့ည ခိုင်သစ္စာ၏ ဆိုပုံ၊ ကပုံကို ပရိသတ်များ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေသည်။ လေးလေးပင်ပင်နှင့်မို့ ကာလသား တစ်သိုက်က
ဆိုပြီ ကာလသားတစ်သိုက်က စင်မြင့်ထောင့် ၀ဲယာကနေ အားပေးနေပါတယ်။
``ခိုင်ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရှင့် ခိုင်ကတော့လေ၊ ဟောဒီရိုးတဲ့၊ အတဲ့၊ ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုပေါကို မယူနိုင်ပေါင်၊ ဟောဟိုက အင်္ဂလိပ်ကြီး မစ္စတာကြီးကိုသာ အသည်းစွဲချစ်ပါသတဲ့ရှင်၊ ကြိုက်ပါသတဲ့ရှင်၊ အားကိုးပါသတဲ့ရှင်၊ ပျိုမေအထုပ်ပိုက်လို့ ဘိုခေါ်ရာ နောက်လိုက်မယ်ရှင်``
ခိုင်သစ္စာက ခေါင်းညိတ်ပြ လိုက်ပါသည်။ ဇာတ်ဆရာ ထွက်သွားပြီးနောက် ငပေါက ခိုင်သစ္စာရဲ့ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ အနားကပ်ပြီး
Really nice post!! This post enlightened patriotic view of point!! And also really match with the current situations which are happening nowadays. Keep it up!! Keep trying and we'll be cheering you up !!
6:54 PM, March 16, 2008